Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 25 October 2016 » SciBraai
Yavelaphi imfuyo egcwele eningizimu ye-Afrika
Iningi lethu alithathi isikhathi sokucabanga ukuthi lemfuyo esiyibona emakhaya njengezimbuzi nezinkomo ukuthi ziqhamuka kephi. Esifundiswa khona ukuthi yonke imfuyo idaliwe yaba kulesi simo esikuyo kumanje nakulendawo ekuyo kumanje. Ucwaningo oluningi luyaphikisana nalokhu kucabanga njengoba umlando utshengisa ukuthi imfuyo yethu isuka emazweni asenyakatho.
Isazi u Karim Sadr waseNyuvesi yaseWitwatersrand egoli uhlanganise umbiko obala imicwaningo eminingi ekhomba imvelaphi yemfuyo yethu emazansi ezwekazi le-Africa. Ngokusho kwalombiko, kuyaziwa ukuthi imfuyo efana nezimvu, izimbuzi kanye nezinkomo kwasungulwa ezwenikazi lase-Asia elisinyakatho kwe-Afrika.
Umbiko uyaqhubeka uchaze indlela eziningi abacwaningi bezesayensi kanye nomlando wabantu abacabanga ukuthi imfuyo yafika ngayo kulendawo emhlabeni. Imicwaningo yonke icishe ivumelane ukuthi abantu bokuqala abafuya izimvu nezinkomo eNingizimu Afrika amaKhoyi-Khoyi kwasekulandela amaNguni njengamaZulu.